Darlin’ (2019) | MM Movie Store
ပထမဇာတျလမျး “The Woman” အဆုံးသတျမှာ လူသားစားမြိုးနှယျဖွဈသညျ့အမြိုးသမီးချေါသှားတာခံရပွီး တိရစ်ဆာနျတဈကောငျလိုကွမျးတမျးရိုငျးစိုငျးနခေဲ့တဲ့ဒါလငျလေးဟာ အခုဒီဇာတျကားထဲမှာတော့ ကတျသလဈဘုရားကြောငျးတဈခုကိုရောကျရှိသှားပွီးယဉျကြေးလိမ်မာကောငျးမှနျတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျဖွဈလာအောငျလို့နထေိုငျလုပျဆောငျပုံတှကေိုတှမွေ့ငျနိုငျမှာပါ…
ဒါလငျတဈယောကျပုံမှနျမိနျးကလေးတဈယောကျလိုနထေိုငျသှားနိုငျမှာလား…သူ့ဘေးနားမှာရှိနကွေသညျ့သူတှကေရော သူ့အပျေါတကယျကောငျးတဲ့သူတှပေဲလား၊သူ့ကိုချေါသှားသညျ့အမြိုးသမီးသူ့နားပွနျရောကျလာတဲ့အခါမှာရော ဘာတှဆေကျဖွဈလာမှာလဲဒီလိုအရာတှကေိုစိတျဝငျတစားနဲ့ကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ….
ပထမဇာတ်လမ်း “The Woman” အဆုံးသတ်မှာ လူသားစားမျိုးနွယ်ဖြစ်သည့်အမျိုးသမီးခေါ်သွားတာခံရပြီး တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လိုကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းနေခဲ့တဲ့ဒါလင်လေးဟာ အခုဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ကတ်သလစ်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပြီးယဉ်ကျေးလိမ္မာကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်လို့နေထိုင်လုပ်ဆောင်ပုံတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာပါ…
ဒါလင်တစ်ယောက်ပုံမှန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုနေထိုင်သွားနိုင်မှာလား…သူ့ဘေးနားမှာရှိနေကြသည့်သူတွေကရော သူ့အပေါ်တကယ်ကောင်းတဲ့သူတွေပဲလား၊သူ့ကိုခေါ်သွားသည့်အမျိုးသမီးသူ့နားပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရော ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲဒီလိုအရာတွေကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်….
Army of the Dead – Link 3
Army of the Dead – Link 2
Army of the Dead – Link 1
Erotic Sister – Link 1
Kyaa Kool Hain Hum – Link 1